Agụla Atụmatụ Ndenye Bookmark | Martech Zone
Agụla Atụmatụ Mgbakwunye
Sunday, October 31, 2010 Tọzdee, Septemba 26, 2013 Douglas Karr
Saịtị ntinye akwụkwọ abụwo ihe amaara kemgbe afọ iri ugbu a. Digg na-agabiga oke ihe mgbu ugbu a mana ọ ka na-enwe nnukwu akụkụ nke ahịa. StumbleUpon, Reddit na Na-atọ ụtọ ka na-eto eto kwa afọ.
Ọ bụ ezie na saịtị dịka Facebook na Twitter dị oke mma maka ịkwalite njikọ na oge site na netwọkụ mmekọrịta gị, ọnụọgụ nke nleta ga-arịgo n'ogo ma daa n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na mgbasa ozi ọzọ na-esote abata. 'anwuola… ha nwere ike ịkpọlite ​​ọdịnaya ochie ma ọ bụ kwalite ọdịnaya ziri ezi n'ime ihe nchọgharị onye ọrụ dị mkpa karịa ebili mmiri nke mgbasa ozi mmekọrịta na-enye.
Social Bookmarking ka na-eto eto na ewu ewu
Ndụmọdụ anọ iji nweta usoro ịdebanye aha ukwu
Jiri saịtị ọ bụla site na ịkwalite njikọ dị mkpa maka ndị na-ege gị ntị yana isiokwu ị chọrọ iji wuo ikike. Ọ bụrụ na ị na-akwalite njikọ nke gị, ị ga-adị ka onye na-agba ọsọ na a ga-eleghara ya anya.
Na-akwalite akaụntụ gị na saịtị ibe edokọbara ọ bụla na netwọkụ mmekọrịta gị na ndị ọbịa na saịtị gị ka ha nwee ike ijikọ gị na saịtị ahụ ha chọrọ iji.
Agụla igwe na-ewu ewu ma ọ bụ nke ọhụụ. Ọtụtụ mgbe, ị ga-ahụ na ọnụ ọgụgụ pere mpe nke ndị ọrụ nwere ike irite uru n'ọkwalite gị. Ndị nabatara oge mbụ nwere mmetụta dị ukwuu, yabụ ịchọta ha nwere ike ịgbasa ngwa ngwa na mbọ gị.
Ebe edokọbara elu
Yahoo! Uzu - ihe karịrị nde mmadụ iri na isii na-eleta kwa ọnwa.
Reddit - ihe karịrị nde mmadụ iri na isii na-eleta kwa ọnwa.
StumbleUpon - ihe karịrị nde mmadụ iri na isii na-eleta kwa ọnwa.
Na-atọ ụtọ - ihe karịrị nde mmadụ iri na isii na-eleta kwa ọnwa.
Mixx - ihe karịrị nde mmadụ iri na isii na-eleta kwa ọnwa.
Fark - ihe karịrị nde mmadụ iri na isii na-eleta kwa ọnwa.
Slashdot - ihe karịrị nde mmadụ iri na isii na-eleta kwa ọnwa.
Newsvine - ihe karịrị 1.3 nde ndị ọrụ kwa ọnwa.
Diigo - ihe karịrị 1.2 nde ndị ọrụ kwa ọnwa.
Tags: ntinye akwukwoibe edokwubara
Nov 1, 2010 na 8:48 AM
Ezigbo ego. Have nwere ọkwa ọzọ nke na-akọwa ntakịrị karịa etu esi arụ ọrụ saịtị ndị edenyere aha a?
Nov 1, 2010 na 9:22 AM
Ndewo Kenan! Edeela m banyere Stumbleupon (https://martech.zone/blogging/stumbleupon-blog-traffic/) a bit ma obughi ndi ozo ozo. Onye ọ bụla n'ime ha na-arụ ọrụ dị iche iche… mana ihe a na-ahụkarị bụ na ha na-enye gị ohere ịhazi ibe edokọbara gị. Tọrọ ụtọ nwere ụfọdụ oké nchọgharị integrations otú i nwere ike nbanye si n'ebe ọ bụla na-ahụ na ndokwa ibe gị.
Site na ikwe ka ị dee saịtị, kwalite ma ọ bụ kesaa ya n'etiti ndị enyi, jiri mkpado ọchụchọ dị mkpa mebe ya, ndị nwere otu mmasị ga-ahụta saịtị gị ka ọ dị mfe. Chee echiche n'ime nke ọ bụla dị ka igwe nyocha 'micro' nke nwere ọdịnaya kachasị ewu ewu ka achọpụtara ọtụtụ yana ọtụtụ okporo ụzọ ebugharị na ya.
Nov 5, 2010 na 5:11 PM
Naanị akara akara a na post.
M na-eche otú ọtụtụ ụlọọrụ tech ahịa na-eji SU, Obi ụtọ na ndị ọzọ?
Otú ọ dị, ọ bụrụ na Twitter & FB na-roped anya ka cubicle ọrụ site corp IT, ikekwe na-elekọta mmadụ ibe edokọbara saịtị bụ ụzọ ọzọ iru folks…
Amaghị m na ntinye akwụkwọ ahụ ka na-arụ ọrụ ugbu a
Edemede a dị ihe dị ka afọ 5, mana anyị ka na-enweta nsonaazụ dị mkpa na StumbleUpon na ọdịnaya nke ewu ewu - dịka Infographics ma ọ bụ White Papers.